Dilal qoshesan oo ka dhacay degmada Huriwaa ee Muqdishooro
Dilal qoshesan oo ka dhacay degmada Huriwaa ee Muqdisho
Kooxo hubaysan ayaa dad rayid ah dil iyo dhaawac ugu gaystay Xaafadda Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Xaafadda Suuqa Xoolaha ee degmada Huriwaa ee gobolka Banaadir ayaa kooxo hubaysan waxa ay ku dileen maanta 2 ruux iyaga oo dhaawacay mid kale kuwaasi oo ahaa dad rayid ah sida ay xaqiijiyeen Ehelada mid ka mid ah dadka la dilay.
Wiil la dhashay mid ka mid ah dhalinyarada la dilay ayaa sheegay in dilka ay fuliyeen labo nin oo ku hubeysnaa bastoolado oo cimaamado kusoo xirtay wajiyada, isaga oo sheegay in uusan garaneyn sababta loo beegsaday dadkaani oo uu sheegay in aysan qeyb ka aheyn dhinacyada is haya.
Ciidamo isugu jira boolis iyo Milatari ayaa gaaray halka uu dilka ka dhacay kuwaasi oo wada baaritaano lagu xaqiijinayo amaanka islamarkaana lagu baadi goobayo kooxahaha hubaysan oo markiiba baxsaday.
Degmada Huriwaa oo dowladda ay kala wareegtay Al Shabaab markii ay ciidamadooda ka baxeen magaalada ayaa waxaa ka dhaca dilal qorsheysan oo ay sii dheertahay weeraro dhowr jeer oo hore lagu qaaday Gudoomiyaha degmadaasi Cumar Jacfaan.